के व्हिस्कीलाई डिक्यान्टिङ चाहिन्छ?-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
के व्हिस्कीलाई डिक्यान्ट गर्न आवश्यक छ?
रक्सी पिउनु अघि, त्यहाँ एक धेरै पवित्र प्रक्रिया छ, जो शान्त छ। ताजा खुल्ला मदिरा, मूल्य फरक पर्दैन, दस मिनेट भन्दा बढीको लागि राम्रो डिकन्टरमा अचम्मको स्वाद लिन सकिन्छ। के व्हिस्कीले डिकेन्टरमा अक्सीकरणको अवधि पछि थप विशिष्ट हुन्छ?
वास्तबमा, एउटै रातो रक्सी संग, व्हिस्की पनि decanted गर्न आवश्यक छ। केहि भर्खरै खोलिएको व्हिस्कीलाई कपमा लगभग 15 मिनेटको लागि डिक्यान्ट गर्न आवश्यक छ, यो अझ राम्रो स्वाद हुनेछ। डिक्यान्टिङले व्हिस्कीको अतिरिक्त अल्कोहल वाष्पीकरण गर्न र गन्धको भावनामा रक्सीको उत्तेजना कम गर्न सक्छ। व्हिस्कीको अक्सिडेशन पछि, यसले थप स्वाद र संरचना प्राप्त गर्नेछ। केही व्यक्तिहरूले एक महिनाको लागि कोठाको तापक्रममा खोलिएको व्हिस्की छोड्ने प्रयास गरेका छन् र उनीहरूले व्हिस्की खोल्दा यो भन्दा दस गुणा राम्रो भएको पाए।
तर सबै एकल माल्ट व्हिस्कीहरू डिक्यान्ट गर्न आवश्यक छैन। केही पुराना व्हिस्कीहरू खोल्दा पिउन राम्रो हुन्छ। यो पूरै बोतल intraday पिउन राम्रो छ, अन्यथा व्हिस्की को अल्कोहल अधिक कमजोर र कमजोर हुनेछ यदि यो रातभर थियो।
कस्तो प्रकारको व्हिस्कीलाई डिक्यान्टिङ चाहिन्छ?
1. युवा व्हिस्की पिउन तयार छैन
युवा व्हिस्कीका लागि, सामान्य रूपमा यसलाई बोतलमा प्रकृतिको डिकन्ट दिनु राम्रो हुन्छ, ब्यारेलमा पुरानो नभएको व्हिस्की सुगन्ध, स्वाद र संरचनामा धेरै गतिशील हुन्छ। यसको शक्ति महसुस गर्न सजिलो छ। यदि डिकेन्टर प्रयोग गरियो भने, समग्र सन्तुलन बिग्रन सक्छ यद्यपि व्हिस्की पाकेको र चिल्लो हुनेछ।
2. जवान शेरी व्हिस्की
ट्यानिन्स को सामग्री धेरै उच्च छ जब व्हिस्की शेरी मा पुरानो थियो, यो एक तीतो स्वाद हुनेछ। विशेष गरी शेरी व्हिस्कीलाई डिक्यान्टिङ चाहिन्छ। कम अल्कोहल युवा शेरी व्हिस्कीको लागि, व्हिस्की खोल्दा कपमा 5-10 मिनेटको लागि मात्र डिक्यान्टिङ आवश्यक हुन्छ। तर कम अल्कोहल जवान शेरी व्हिस्कीको लागि, यो बोतल हरेक दिन 30 मिनेटको लागि खोल्न आवश्यक छ र यो एक हप्ता सम्म रहनुपर्छ।
3। Aged Cask शक्ति
यसलाई सामान्य कपमा डिक्यान्ट गर्न 5-10 मिनेट मात्र चाहिन्छ, तर यसले बोतलमा व्हिस्कीको भागमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक पटक बोतलमा मध्यम डिक्यान्टिङले तपाईंलाई फरक अनुभूति दिनेछ, यो राम्रो र राम्रो हुनेछ।
4. पुरानो व्हिस्की
Fवा पुरानो व्हिस्की, यो तथ्य परिस्थिति अनुसार decanting गर्न आवश्यक छ भने निर्णय गर्नुपर्छ। के म निश्चित गर्न सक्छु कि पुरानो व्हिस्की को स्वाद चिकनी छ। यसले घ्राणको अनुभूतिलाई मात्र प्रभाव पार्छ यदि व्हिस्की निस्किरहेको थियो।
Hके तपाईलाई थाहा छ व्हिस्की डिकेन्ट गरिएको छ?
कति समयसम्म यसलाई हटाउन आवश्यक छ? र कुन स्वाद राम्रो छ? Iआफ्नो अनुभव अनुसार मात्र न्याय गर्न सक्छ। यसले हरेक दिन एक वा बढी स्वादको साथ परिणाम अवलोकन गर्न सक्छ। सबैभन्दा व्यावहारिक विधि भनेको प्रत्येक 15 मिनेटमा स्वाद लिनु हो, व्हिस्की लगभग सबै भन्दा राम्रो हुन्छ जब त्यहाँ फरक र सुखद स्वादहरू छन् जुन पहिले भन्दा स्पष्ट रूपमा राम्रो छन्।
बोतल खोलेपछि कसरी भण्डार गर्ने?
1. लामो समयको लागि प्रत्यक्ष घाम वा अन्य बलियो प्रकाशबाट बच्नुहोस्, यसलाई चिसो ठाउँमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
2. बोतललाई तेर्सो नभई सीधा राख्नुपर्छ, ताकि अल्कोहलले कर्कलाई सजिलैसँग कुर्छ।
3. पिउने समाप्त भएपछि टोपी कडा रूपमा छोपिएको हुनुपर्छ।
4. व्हिस्की भण्डारण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यसलाई सकेसम्म चाँडो पिउनु हो।
अघिल्लो: स्कटिश व्हिस्की' ब्यारेल निर्माता 'प्रशिक्षुता बार मिट्जवाह
अर्को: किन धेरै जसो स्कच व्हिस्की लेबलहरू "हिरन" संग छन्?